AMISOM oo sugeysa ammaanka shirka lagu qabanayo Xerada Afisyooni | Dhacdo
Home Wararka Maanta AMISOM oo sugeysa ammaanka shirka lagu qabanayo Xerada Afisyooni
AMISOM oo sugeysa ammaanka shirka lagu qabanayo Xerada Afisyooni
Ambassador Francisco Madeira, the Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission (SRCC) for Somalia, speaks during a press conference about Al Shabaab terrorists masquerading as AMISOM troops planning atrocities on Somali people. The press conference was held in Mogadishu, Somalia on February 10, 2016. AMISOM Photo / Ilyas Ahmed
Wakiilka Midowga Afrika ee Somaliya ahna Madaxa Hawlgalka Nabad Ilaalinta AMISOM, Francisco Madeira ayaa sheegay in Xoogaga AMISOM ay suggi doonaan ammaanka Xerada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho, oo lagu wado in lagu qabto shirka Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir kaga wadahadlayaan arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Ka dib kulamo kala gooni gooni ahaa oo caawa Xerada Xalane ku yeesheen Wakiilada Beesha Caalamka ayaa war uu soo saaray Wakiilka Midowga Afrika ee Somaliya waxaa lagu sheegay in Ciidamada AMISOM suggi doonaan ammaanka goobta shirka.
“Waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dhammaan Hoggaamiye-yaasha Soomaalida, shacabka iyo daneeyayaasha kale in AMISOM, iyadoo la kaashaneysa la hawlgalayaasheeda, ay diyaarisay talaabooyin lagama maarmaan ah, si loo hubiyo in kulanka uu ku qabsoomo jewi wanaagsan, amni iyo nabad oo dhinacyada oo dhami ay u dareemaan si raaxo leh in laga qayb qaato.” Ayuu yiri Wakiilka Midowga Afrika.
Tani waxay ka dambeysay qalqal dhanka amniga ah oo maanta laga dareemay aagga Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, ka dib markii lagu arkay ciidamo cusub oo xalay ay Dowladda Federaalka ku soo daadisay.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Dowladda Somaliya ay ciidamo ku soo daabushay agagaarka goobta ay degan yihiin.
Inkastoo Taliska Booliska Soomaaliyeed uu beeniyay in ciidan cusub la keenay Garoonka Aadan Cadde ayay haddana Saraakiisha Ciidamada kuu sheegayaan jiritaanka ciidamada goobtaasi lagu arkay.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa juhdi badani ku bixinaya, sidii ay Isniinta shirkaasi uga qaybgeli lahaayeen Madaxda Dowlad Goboleedyada oo qaarkood sababo amni sheegaya inaanay uga qaybgeli karin.
Safaaradda Mareykanka ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegtay inaanay Madaxda Dowlad Goboleedyada ka taggi karin Caasimadda Muqdisho, iyadoo aan heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka.
“Dadka Soomaaliyeed waxay hadda doonayaan doorasho. Waa in Madaxda Dowlad Goboleedyada ku sugnaadaan Muqdisho, illaa heshiis doorashada laga gaarayo. Guul darradu maahan ikhtiyaar.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraal lagu daabacay barta Xafiiska Qaramada Midoobey ee UNSOM ayaa lagu yiri “Hoggaamiyeyaasha Soomaalida waa inay ku heshiiyaan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-ka September, oo ay ugu gudbaan doorashooyinka, iyadoo aanu dib u dhac jirin.”
Safiirka Ingiriiska ee Somaliya, Kate Foster ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda xiriirka dadweynaha waxaa uu u qornaa “Waxaan ku faraxsanahay in qof walbaa uu yimid Magaalada Muqdisho oo uu ka dhici doono shir madaxeedka soo socda. Aad ayay muhiim ugu tahay hadda dhammaan hoggaamiye-yaashu inay ku heshiiyaan hirgelinta qaabka doorashada ee September 17, doorashooyinka oo dib u dhac la’aan ku yimaada waa danaha dadka oo dhan.”
War maanta ay soo saareen saaxiibada caalamka ee Somaliya ayaa Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada loogu baaqay inay u gudbaan doorashooyinka.
Previous articleSirta ka dambeysa ciidamada cusub ee la geeyay Beled Xaawo (SAWIRRO)
Next articleQodobada xasaasiga ee ku xeeran shirka ka furmaya Magaalada Muqdisho